Ọtụtụ narị m echiche na-akọrọ; agbalị ide banyere a isi nke — HunterThinks.com
Ọtụtụ narị m echiche na-akọrọ; agbalị ide banyere a isi nke
23 April 2021 03 December 2014
Kemgbe ọnwa, M na-akọrọ ọtụtụ narị m echiche sitere na site physics ka mgbanwe ihu igwe ka Mgbakọ ka azụmahịa ka iwu ka ọrụ ka anụ ụlọ ime ihe ike ka na-elekọta mmadụ mgbanwe ka foto. The echiche m na-akọrọ ndị na echiche na m ama dere na a format na dị mfe iji tọghata WordPress. My maa bụ na echiche m gwa ndị ọzọ karịa 30% nke echiche m bouncing gburugburu isi m ma ọ bụ dere na obere-inweta formats.
Ke mbubreyo March 2012, na ARDC nyere iwu na-akwadoghị sobpona ka OkCupid.com niile ndia ha nwere banyere m. OkCupid.com emeghị ihe iwu: kama na-ezipụ ndị sobpona n'ụlọikpe, ụlọ ọrụ zigara ndị iwu na-akwadoghị rịọrọ ozi ozugbo na ARDC. Ha zigara ya dị ka ihe email (eleghị anya illegal) ha wee zigara n'oge. N'ihi na ARDC ozugbo natara ozi, Apụghị m-aka nke sobpona n'ụlọikpe: ọ dịghị ekwe omume ka un-mgbanaka a mgbịrịgba.
Mgbe ARDC illegal wakporo m nzuzo-kpachapụrụ mwakpo m nzuzo ịmaja m na ha na-awakpo m nzuzo. The ndekọ ha anakọtara gụnyere ozi gbasara nke banyere 900 ndị ọzọ, tinyere email adreesị, nọmba ekwentị, aha, na n'ụlọ adreesị.
M eji ọtụtụ awa ikpeazụ fọrọ nke nta afọ atọ na-agbalị ịnagide ARDC si mkparị omume, ma ọbụna ugbu a, M na-ama jijiji dị ka m na-agbalị dee banyere nke a.
Na banyere otu izu, M ga-agba ọsọ nke ego. The mgbe nile nchegbu na enweghị nkà mmụta ọgwụ bụ ihe ndị ọzọ dị oké njọ, Otú ọ dị. Achọghị m ka m na-adị ndụ ọzọ n'ihi na nke a mgbu bụ nke ukwuu na-arịọ ka nri na-ebi ndụ bụ isi iyi nke ihe mgbu. Jiu Jian dechapụ sǐ.
Otu ARDC, Mata echiche, Ndụ m Tags nchegbu, Coping, Death and dying, Deathwish, ịda mbà n'obi, Domestic violence, OkCupid, Panic aghara, Personally identifiable information, Nzuzo, PTSD, Subpoena, WordPress, Ihe ọ bụla banyere ha post igodo
Marilyn, baseball nyocha azụmahịa echiche